Nnyefe n'ime awa 2 na ọnụ ahịa nke € 0 na-agbakwunye na ụlọ ahịa Apple | esi m na mac
A na-agbakwunye nnyefe n'ime awa 2 na ọnụ ahịa € 0 na ụlọ ahịa Apple
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ nwere ụlọ ahịa Apple dị nso n'ụlọ, ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ ya nnyefe n'efu n'ime awa abụọ maka ihe dị na ụlọ ahịa Apple zụrụ tupu 24/12/21 na 12:00 ehihie. Dịka anyị na-ekwu, nhọrọ a dị naanị na mpaghara ụfọdụ mepere emepe ebe enwere nhọrọ mbupu n'ezie n'ime oge a kara aka.
Dịka ọmụmaatụ n'ihe banyere zụta iPhone 13 Pro ma ọ bụ otu ngwaahịa ha nwere na ngwaahịa na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị n'ime obodo Barcelona ma ọ bụ nso, anyị nwere ike ịnụ ụtọ mbupu n'ime awa abụọ n'efu.
Nbufe awa abụọ maka € 0 na ịzụrụ ihe emere n'etiti Disemba 22 na 24, 2021 ghere oghe maka ụfọdụ ngwaahịa Apple na mpaghara ụfọdụ mepere emepe, Ọ bụghị ọrụ na-arụ ọrụ maka ndị bi 100 kilomita site na ụlọ ahịa gọọmentị. Ọrụ a adịghịkwa maka kọmpụta Mac omenala, ngwaahịa ndị a kanyere, na ụfọdụ iwu, dị ka nke a na-akwụ ụgwọ site na ego ma ọ bụ mbufe ụlọ akụ. Oge nnyefe dabere na adreesị ahọpụtara, nnweta ngwaahịa na oge ụbọchị mgbe etinyere iwu.
Chọta ụlọ ahịa ịhụ oge mmeghe ma ọ bụ gaa na ibe ndenye ọpụpụ ka ịlele oge nnyefe echere. Ọ dị mkpa ịbịanye aka na nnyefe nke ụdị a na dịka anyị kwuru na ọ nwere ike ịba uru maka ndị na-enweghị oge n'efu ugbu a ma chọọ ịzụta ngwaahịa Apple maka ezumike. The downside nke a bụ na ọ bụ nnọọ nanị na obodo ebe e nwere ugbua anụ ahụ na-echekwa Apple, ya mere n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ ka mma ịgakwuru ha ịzụta. Ka ọ dị otú ahụ ọrụ ahụ ga-abụ n'efu maka ụbọchị ole na ole, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ya ị nwere ike iji ya mee ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » A na-agbakwunye nnyefe n'ime awa 2 na ọnụ ahịa € 0 na ụlọ ahịa Apple
IMac ọhụrụ 27-inch ga-agbakwunye agba dị iche iche na ndị dị ugbu a